SBB ရထားများသည်ဥရောပရှိအမျိုးသားရထားလမ်းများထိပ်တွင်ရှိသည်, နှင့် 2017 ဝန်ဆောင်မှု၎င်း၏အရည်အသွေးအဘို့အပထမနေရာတွင်ခဲ့သည်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်, နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်း.
SBB ရထားဝန်ဆောင်မှုများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးရထားဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်, လျော့နည်းနှင့်အတူ3ပျမ်းမျှအားဖြင့်မိနစ် '' နှောင့်နှေး.
SBB ရထား မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်သာ2ယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်အခြားရထားလမ်းကုမ္ပဏီများသည်, ၎င်းတို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်ရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးစီးပွါးရေးလက်မှတ်မဟုတ်ရင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းမယ်လို. လူကြီးမင်း၏လက်မှတ်များကိုလူသုံးများရောင်းနိုင်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိသေးသော်လည်း, SBB အနေဖြင့်လက်မှတ် ၀ ယ်ခြင်းကိုလက်မှတ်ရောင်းရန်ခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
1) မင်းရောက် မြို့လယ်ခေါင်. ၎င်းသည်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SBB ရထား၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. SBB ရထားများနှင့်အားလုံး အခြားရထားခရီးသွားလာ မြို့၏မည်သည့်နေရာမှမဆို၊, doesn’t matter if it isaသဘာဝအရံ သို့မဟုတ်ကျေးရွာ. လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိအချိန်အတော်အသင့်သက်သာစေတယ်. ရထားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, သင်သွားလိုသည့်မြို့၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်. သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ, ဂျီနီဗာ, ဘေဆယ်, Zermatt, သို့မဟုတ်ဇူးရစ်, မြို့လယ်ခေါင်သည် SBB ရထား၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်!